ပန်ဒိုရာ: ခုတလော တက်စာ
တက်ဂ်ထားကြတာတွေက တော်တော်များပါတယ်။ နှင်းဆီနက်က ၀ါသနာ၊ မသက်ဝေက နောင်လာမယ့်အနှစ်နှစ်ဆယ်၊ ကိုအောင်သာငယ်ရဲ့ ဘ၀အကြောင်းဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်။ မနော်က နောက်မှ တက်ဂ်ပေမယ့် အပေါ့ပါးဆုံးမို့ အရင်ရေးလိုက်ပါတယ်။ ကျန်တာတွေလည်း ရေးပါ့မယ်။
ဟိုတလောက ချောင်းဆိုးတယ်။ ပျောက်တော့ ၂ ပတ်လောက် နေမကောင်းဖြစ်။ ပျောက်တော့ မျက်စေ့စွံတယ်။ ပျောက်တော့ နှာစေးတယ်။ ပျောက်တော့ ချောင်းဆိုးတယ်။
ဆေးဝါးကတော့ မူးရင်ရှူ မောရင်သောက် သောက်ရင်မူး (ဒါကတော့ ကပီတိရဲ့ စကား)
မျက်နှာစာအုပ် (Face book ဟုလည်းခေါ်ပါသည်။)
သူဌေးကတော် (သူ့ကိုသူဌေးဖြစ်စေချင်တာ ကိုယ့်စေတနာပါ။)
မြန်မာစာ (ဘာသာစကားကို ဆိုလိုသည်မဟုတ်။ အစားအစာကိုဆိုလိုသည်။)
အသက် ၅ နှစ်မှ ၁၀ နှစ်အရွယ် ငယ်စဉ်ကာလ
ပိုက်ဆံရှာတဲ့ အလုပ်ကို မလုပ်ဘဲ ဇိမ်နဲ့ထိုင်စားပြီး ပိုက်ဆံမရတာတွေကို လုပ်ခြင်း
အလုပ်(job) (လောလောဆယ်မှာ သူမရှိလို့မဖြစ်ဘူး)
သူ.. အနားမှာရှိဖို့ ပေါ့။ (ဒီလိုပဲပြောသင့်တယ်။)
ဟယ်.. ဒီမိုးဒီလေ ဒီလူတွေနဲ့တော့…
Posted by pandora at 10:49 PM
ချစ်သူနဲ့ကွေကွင်းရခြင်းသည် ဘာဆိုလားး)
ပဉ္စမမြောက်ရေးသူအဖြစ် ဂုဏ်ပြု မှတ်တမ်းတင်
ကိုယ်လဲ ရေးရမယ်ဆိုတော့ တကြောင်းချင်းစီတွေးရင်း သေသေချာချာ ဖတ်လာတာ...
လုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ ပန်ပန်တို့ ...
ဒါမျိုးခဏခဏကြုံဖူးတာ ကိုယ်ကလဲ အမှတ်မရှိ
ဖြစ်ချင်နေတာကို ဖတ်ရတော့ မထိန်:နိုင်ဘဲပြုံးမိပါတယ်။
သြော်... ငါလိုလူစား အများကြီးပါလား။ အားတက်သွားပြီ။း-)
ပန်ပန်တို့ကတော့ ပြောကို မပြောချင်တော့ဘူး...း)
လာလိုက်တာနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ပြုံးမိတာပါဘဲ....
အဖျားဖြတ်တာလေး သဘောကျတယ်..း)
ပထမတက်ဂ်ကြွေးကို အရင်ဆပ်ဖို့ ရေးနေဆဲတန်းလန်း
သူဌေးကတော်ဖြစ်ချင်တာချင်းတူတယ် မပန်ရေ. :D
ခုတလော ပျော်နေတဲ့ မပန်ဒိုရာရဲ့အိမ်လေးကို ခုလာလည်တယ်။ ခုတလောမပြုံးရတာကြာပေမယ့် ခုတော့ပြုံးမိသွားတယ်။
ဒါပေမယ့် ချစ်တဲ့ ခင်တဲ့ စိတ်နဲ့
မမရဲ့ ခုတလောလေးက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး...
ရင်ထဲမှာ ရှင်းနေတယ် ထင်တယ်...
ဒါပေမဲ့ ဖတ်ရတာ ..ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ပြုံးမိတာပေါ့
Hehhehe.. Love ya post. Love ya too. keke.
ပုံရိပ်လည်း သူဌေးကတော် ဖြစ်ချင်ပါသည်။ ပိုက်ဆံမရသော အလုပ်များကို အချိန်ပြည့်လုပ်ချင်လို့ပါ။ (ဥပမာ ဘလောက် ရေးခြင်း)
ခုတလော..တက်စာတွေ စားပြီး ခေါင်းကိုက်နေလို့..ဘာနဲ့ တွဲစားရလည်း လာကြည့်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး ၀န်ခံချက် တခုပဲ ယုံတယ်.. ခွိခွိ
ဟားဟား။ ဖတ်ပြီး အားရပါးရ ရယ်သွားတယ်။ :D
ဒါလေးဖတ်လိုက်ရတာ စိတ်ကိုကြည်သွားတာပဲ… တကယ့်ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေ…
၀န်ခံချင်တာတစ်ခုနဲ့ တင် အပေါ်ကဖတ်လာသမျှ တက်စာတွေ အားလုံးထွက်ပြေးကုန်တော့တာပဲ၊ ဟားဟား။
သြော်..တက်စာ တက်စား)
နောက်ဆုံး တကြောင်း အကြိုက်ဆုံးပါ ...
အဲ့လို ပွင့်လင်းတာ မျိုးလေး .. :)
ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်ဆင်ခြင်မိတာလေးကို သဘောအကျဆုံးပဲ အစ်မး)) ရေးထားတာတွေက ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ ချစ်စရာကောင်းတယ်...